Bursa Şehir Hastanesi Ulaşımı Nasıl Sağlanacak – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaSida loo Bixiyo Gaadiidka Cisbitaalka Magaalada Bursa
05 / 08 / 2019 16 Bursa, tareenka, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
Gaadiid caafimaad leh oo ku socda Isbitaalka Magaalada Sehir
Hospital Bursa City Gaadiidka Sidee si ay u bixiyaan: isbitaalka magaalada xnumx'unc Bursa Turkiga, Hospital City, ayaa maanta laga furay Ra'iisul Wasaare Recep Tayyip Erdogan. Isbitaalka Magaalada Bursa oo leh awood sariirta oo dhan oo ah kun 10, isbitaal guud 355, cudurada dumarka iyo cusbitaalka caruurta 308, isbitaalka wadnaha 222, isbitaalka oncology 271, cusbitaalka daaweynta jimicsiga jirka (FTR) 254, amniga sare ee caafimaadka maskaxda (YGAP) cosbitaalka 200 sariirta awooda.
Bursa, oo leh guud ahaan xarumaha 745 ee cusbitaalada kala duwan oo ay ka mid yihiin guud ahaan, umuliso, dhalasho, wadno-xanuun, daweyn jireed iyo baxnaanin (FTR), amniga sare ee maskaxda (YGAP) iyo dhismaha 365 kun 6 aag mitir oo ku yaal degmada Dogankoy degmada Nilüfer Isbitaalka Magaalada 355 wuxuu bilaabmaa inuu aqbalo bukaanka Talaadada bisha July. Total rugta 16, qolka qalliinka 403, 49-sariirta ilmaha iyo qaybta daryeelka degdegga ah ee dadka waaweyn la 217 maalin kasta kun 2 bukaan qabashada xaaladaha degdegga ah iyo in guud ahaan 110 kunka 36 bukaanka Physics oo ku yaalla dhismaha adag loogu tala galay wareegga iyo Hospital Rehabilitation, Turkey ee la sariiraha 200 ugu weyn booska. Cusbitaalka cusub ee magaalada Bursa ayaa noqon doona tallaabadii ugu dambeysay ee lagu aqbalo bukaanka Isbitaalka Magaalada Bursa, halka Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Yakup Canbolat, uu kulan la yeeshay maamulayaasha magaalada ee isbitaalka. Duqa magaalada Alinur Aktaş, Agaasimaha Caafimaadka ee Gobolka Özcan Akan, Osmangazi, Nilufer iyo Yildirim Mayors iyo madaxda sare ee hay'adaha dawlada ayaa ka qayb qaatay.
Isbitaalka ugu qalma Turkiga
Agaasimaha Caafimaadka Gobolka Özcan Akan, wuxuu soo bandhigay warbixin ku saabsan qalabka iyo kartida Isbitaalka Magaalada Bursa. Hospital City Bursa, Turkey ugu weyn, laakiin ma aha dal carabka ku adkeeyay in isbitaalada ugu qalma, oolna ah dadweynaha Magaalada isbitaalada gudahood waa la xiri doonaa 'sheegasho waa in la caddeeyo. Akan ayaa sheegay in Isbitaalka Isbitaalka Uurka ee Turkiga Akyol iyo Isbitaalka Matxafka ee Zubeyde Hanim ay la wareegi doonaan warbixinta khatarta ah ee sababtoo ah maaha kuwo waafaqsan xeerarka dhulgariirka. . Xamdi, Akan ayaa sheegay in tirada guud ee sariiraha 250 iyo tirada sariiraha 773 ay kordhin doonaan isbitaalka magaalada, iyo in tirada sariiraha cusbataallada gobolka ee Bursa ay kor u qaadi doonaan 365 kun 109. xusuusiyay.
Barwaaqaysan, tirada 10 sariiraha per kun oo qof waa ka sarreeyaa celceliska ah ee Turkey ee Bursa, Turkey, halka 27 celcelis ahaan, iyagoo doonaya in la kordhiyo tirada sariiraha in Bursa ee 33 ugu dhakhsaha badan, ayuu hadalkiisa ku daray.
Ka dib markii la soo bandhigay Agaasimihii Caafimaadka ee Akan Governor Akan Guddoomiyaha Canbolat iyo Burcadda ayaa booqday isbitaalka.
Gaadiid caafimaad leh
Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktas, ka dib booqasho isbitaal ah, ayaa sheegay in bilowga kasta uu yeelan doono dhibaatooyin gaar ah, laakiin nidaamku wuxuu u shaqeyn doonaa sida ugu dhakhsaha badan. Duqa magaalada Aktaş ayaa sheegay in isku day lagu sameeyey sidii loo abuuri lahaa aragti kala duwan gaar ahaan Isbitaalka Magaalada waxaana uu yiri, unlar May dhammaan muwaadiniinta aan ku faraxsanahay. Cusbitaalada hadda jira ayaa dib loo eegi doonaa. Isbitaalada aan la daryeeli karin sanado ayaa la daryeeli doonaa. Waxaa jira meel aad u fiican. Faahfaahinta oo dhan ayaa la tixgeliyey. Waxaan rajeynayaa in aan cidna dhici doonin, laakiin kuwa sugaya bogsashada isbitaalka ayaa bogsanaya. Mid ka mida maadooyinka ugu xiisaha badan waa gaadiidka isbitaalka. Marka arrintaan la eego, maadaama degmada Metropolitan, shaqadeena shaqadeena gaar ahaan marka loo eego adeegga baska. Waxaan bilaabeynaa adeegyadeena basaska oo ku saleysan Demirtas, Station-ka Baaskiil-wade ee Baaskiilka iyo Xarunta Warshadaha Warshadaha ee Jimcaha. 7-7,5 ayaa la sameyn doonaa hal mar daqiiqad tan iyo markii la isku dari doono adeegyada metro. Tani waa marxaladda koowaad ee gaadiidka. Marxaladda labaad, Bülent Ecevit Boulevard waa inuu gaaraa isbitaalka. Halkan, waxaa loo baahan yahay in la wareegto qiyaasta 20-25 million pounds. Marxaladda saddexaad waxay tahay in la kordhiyo nidaamka tareenka ee isbitaalka. Kordhinta khadadka shaqada ee qiyaasta 5,5. Tani waxay sidoo kale qaadan doontaa nidaam sanadle ah oo ah 1,5 - 2. Waxaan ku dadaalnaa in aan hubinno in dadkeenu ay gaari karaan Isbitaalka Magaalada iyada oo aan wax dhibaato ah. Waxaan jeclaan lahaa in aan u mahadceliyo qof kasta oo gacan ka gaystay magaaladeena, gaar ahaan Madaxweynahayaga iyo Wasiirka Caafimaadka, oo cisbitaal noo soo galay magaaladeena.
Laga soo bilaabo raaxada a hotel 5 hotel
Guddoomiye Ku Xigeenka Berbera, Yakup Canbolat, haddii ay jirto, si ay u arkaan cilladihii ugu dambeeyay ee la sameeyay iyo in xal loo helo waqti gaaban si ay ula kulmaan dhamaan shirkadaha sare, kadibna booqday isbitaalka, ayuu yiri. Canbolat wuxuu sheegay in Bursa la siiyay isbitaal ku yaala raaxada hoteelka 5 wuxuuna yiri, ama waxaan rajeynayaa in isbitaalkayagu uu faa'iido u leeyahay dalkeenna iyo Bursa. Xukuumaddayada, xukuumaddeena waxay runtii siisaa isbitaal ku raaxeysiga hoteelka 5 ee adeega muwaadiniinteena. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo qof walba, gaar ahaan Madaxweynaheena, kuwaas oo gacan ka gaystay inay keenaan isbitaalkaan magaaladeena. "
Lines for Isbitaalka Magaalada
H / 1 Khadka Jidka: Barbaros Avenue - Panayır Avenue - Inönü Avenue - Cumhuriyet Avenue - Avenue Osmangazi - Gaadiidka Mustafa Karaer - Jidka - Bursiga Rugta Shaqada - Xarunta Shaqada - Korupark Junction - Izmir Yolu Caddesi - Jaamacadda Jaamacadda (Soo noqoshada: Wadada la midka ah)
Khidmadda: 3,35 TL oo buuxa - Lacagta 2,70 TL - Arday 2,20 TL
H / 2 Khadka Jidka: Gaadiidka: Saldhigga Dhismaha ee Bannaanka - Xarunta Shaqada - Bursa Cisco Yolu Caddesi - Isbitaalka Magaalada Bursa
Soo noqoshada: Isbitaalka Magaalada Bursa - Gaadiidka Bursada - Xarunta Shaqada - Xarunta Ganacsiga ee Esentepe
Khidmadda: Lacagta 2,40 TL, Discount 1,90 TL, Arday 1,60 TL
H / 3 Khadka Route: Gaadiidka: Goobta Ganacsiga yaryar - Jolalka Yolu - Jaad Dhismo - Uğur Mumcu Boulevard - Iskuul Boulevard - Ceeriga - Erdinç Street - Ceviz Street - Göçmen Street - Farmlik Street - Gümüş Cadde - Isbitaalka Magaalada Bursa
Soo noqoshada: Isbitaalka Magaalada Bursa - Gumus Street - Ciftlik Avenue - Gocmen Street - Ceviz Avenue - Erdinc Street - Cicek Avenue - Ozluce Boulevard - Ugur Mumcu Boulevard - Iskuulka Yolu Avenue - Saldhig Weyn
Khariidadda Bursa Metro iyo Tram
Gaadiidka Cisbitaalka Elazig Sehit Fethi Sekin City
nidaamka Rail in Bursa marayo iskaashiga ka dhexeeya Turkey iyo Poland ...
Isbitaalka Magaalada Bursa
Adeegyada Isgaadhsiinta ee Magaalada Bursa
Isku socodka basaska ee magaalada Bursa
Xiriirka gaadiidka ee Isku-xirka iyo Isbitaalka Magaalada Bursa
Awooda sariirta Cisbitaalka Magaalada Bursa
Saldhigga Bursaray ee Ganacsiga yaryar